के हो bitcoin ? एस्तो छ bitcoin को फाइदा। – आइटी खबर डट नेट
by itkhabar April 13, 2021 November 23, 2021
के तपाईंलाई थाहा छ bitcoin भनेको के हो ? धेरैलाई थाहा होला या नहोला bitcoin को भ्यालु दिन प्रतिदिन कसरी बढ्दैछ।
के तपाईंले कहिल्यै bitcoin को बारेमा सोध खोज गर्नु भाको छ या जान्न चाहनु हुन्छ ? कि bitcoin कहाँबाट र कसरी चलिरहेको छ, यदि तपाईंलाई यसको बारेमा थाहा छ भने धेरै राम्रो र यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने bitcoin को बारेमा जान्न या थाहा पाउन र एसको फाइदा को बारेमा पूर्ण रुपमा जान्न को लागि यो जानकारी तपाइको लागि लाभदायक हुन सक्ने छ। यसले कसरी काम गर्दछ त। बिटकोइन एक प्रकारको डिजिटल मुद्रा हो। यो अन्य मुद्रासँग पूर्ण रूपमा भिन्न छ किनकि हामी bitcoin लाइ पैसा जस्तो छुन सक्दैनौ।
bitcoin लाई सन् २००९ मा एक जापानिज नागरिक सतोशी नाकामोतो नामको व्यक्ति द्वारा स्थापित गरिएको थियो जुन बेला अर्थात् सुरुवाती समयमा bitcoin को मूल्य १ bitcoin बराबर नेपाली रु. 1.२०/- थिय। जुन बेला २ ओटा पिज्जाको मूल्य दश हजार bitcoin तिर्न परेको थियो भने आज २०२१ तिर आइपुग्दा १ bitcoin बराबर नेपाली रु.७२५४१७९.६०/- पुगेको छ। अब सोच्नुहोस bitcoin को लोकप्रियता कति धेरै रप्तारमा बढिरहेको छ। Bitcoin एक विकेन्द्रीकृत मुद्रा हो, जसको अर्थ यो हो कि यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै बैंक वा अधिकार तथा सरकार छैन, र यसको कुनै स्वामित्व पनि हुँदैन। एस्लाई मात्र online wallet मा राख्न सक्छौ। सानु उधारहण दिनुपर्दा तपाईको mobile मा भएको ब्यालेन्स जस्तै हो जसरि mobile मा भएको balance लाइ call गरेर, अर्को mobile मा balance transfer गरेर प्रयोग गर्नु हुन्छ त्यसरीनै bitcoin लाइ पनि प्रयोग मा ल्याउन सकिन्छ तर भिन्नता भने धेरै भन्दा धेरै फरक छ bitcoin मा भएको पैसा भने दिनप्रति दिन बढ्दै जान्छ जसरि सुरुवाती मूल्य १ बिटक्वाइन बराबर रु. १.२०/- बाट २०२१ सम्म मा रु.७२५४१७९.६०/- पुगेको छ।
bitcoin संचालन गर्ने आधिकारिक व्यक्ति कोइपनि नहुनाले एसको माग अनुसार यस्को महत्व value पनि तलमाथि भैरहन्छ।
अनलाइन भुक्तानी गर्न वा कुनै प्रकारको लेनदेन गर्न बिटकोइन प्रयोग गर्न सकिन्छ। बिटकोइन अनलाइन मार्फत सजिलै साथ् एक अर्कासँग लेनदेन तथा कारोबार गर्न सकिन्छ। bitcoin को प्रमुख फाइदानै इनई हुन् कि पैसा जम्मा पनि भइराख्ने तेसै बाट सामान खरिदबिक्री पैसा सट्टापट्टा गर्न पनि मिल्ने र bitcoin wallet मा भएको bitcoin को भ्यालु पनि रातदिन बढिरहने।
bitcoin लाइ इलेक्ट्रोनिक रूपमा भण्डार अर्थात् deposit गर्न पर्ने हुन्छ र यसलाई राख्नको लागि bitcoin wallet चाहिन्छ। जस्तै हाल नेपालमा चलिरहेको e-sewa wallet भने जस्तै, bitcoin को पनि धेरै प्रकारको अनलाइन वालेटहरु छन् जस्तै , मोबाइल वालेट, हार्डवेयर वालेट, डेस्कटप वालेट, वेब वालेट हामीले यी वालेटहरू मध्ये कुनै एउटा प्रयोग गरेर यसमा एउटा खाता खोल्न पर्ने हुन्छ।
यी वालेटहरुले बिटकोइन खाता नम्बरको रुपमा हामीलाई एक अद्वितीय आईडी दिन्छ तेसै बिटकोइन खातामा कहिँबाट बिटकइन प्राप्त गर्नु, अरुलाई दिन,बिटकोइन जम्मा गर्न र सामानहरु किनबेच गर्न सकिन्छ। जसलाई बिटकोइन वालेट भनिन्छ। यसै bitcoin वालेट मार्फत बेचिएको bitcoin लाइ अरु मुद्रामा बदलि आफ्नो बैंक खातामा सार्न तथा जम्मा गर्न सकिन्छ।
bitcoin किनबेच को लागि bitcoin wallet खोल्नु पर्ने हुन्छ। bitcoin खरिद गर्नको लागि भने MasterCard / Visa Card प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसको लागि यो site मा register गर्न सकिन्छ। https://www.blockchain.com/
हुनत भोलिको दिन कसलाई थाहा हुन्छ र तर पनि संसार बिसुवासमानइ अडिएको छ। त्यसर्थ केहि गर्छु र गर्न पर्छ भन्ने लाग्छ भने bitcoin लाइ एकफेर विचार गर्नुस संसार information technology ले ढाकी सकेको छ सबै सबै digital मय बन्दै छ। हरेक कुरो online मार्फत चल्दै छ।